Chii chinonzi Conjoint Analysis uye nguva yekuishandisa - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Mazuva ano, bhizinesi rega rega rinofanirwa kuyera zvigadzirwa nemasevhisi uye nekufunga kuti vatengi vanozovaziva sei kuti vabudirire uye varambe vari mumakwikwi, uye izvi zvinoitwa uchishandisa kuongororwa pamwe chete. Iyo inopa ruzivo nezve maitire evatengi kuita kwavo kwekutenga sarudzo uye anobatsira mabhizinesi kutsanangura nzira dzekutengesa uye kuronga chigadzirwa chinobudirira pamwe nehunhu hwakawanda.
Conjoint ongororo inozivikanwa zvakare seDiscrete Sarudzo Inofungidzira kana yakataurwa sarudzo yekutsvaga. Iko kusangana kwakabatana kunopa ruzivo nezvekuti vanhu vanosarudza sei zvigadzirwa nemasevhisi uye nezvavanokoshesa mune icho chigadzirwa uye masevhisi. Kuongorora kwakabatana kunopa vanhu sarudzo uye wozoongorora madhiraivha avo esarudzo kuburikidza neyakaunganidzwa mibvunzo yakabatana.
Kubva ma1970s kusangana pamwe uye kuongorora kwekubatana kunoshandiswa zvakanyanya kune chigadzirwa chigadzirwa uye kuongorora masevhisi. Iyo zvakare inoshandiswa kune yakasarudzika sarudzo fungidziro, musika share share uye kutsvakurudza misika. Iyi yekufungidzira modhi yakavakwa ichishandisa mubatanidzwa dhizaini inopa rubatsiro rwakakosha kusangano rinovabatsira pakuronga, kuyedza dhizaini uye kugovera zviwanikwa zvinoenderana.
Ichi chishandiso hachiongorore sarudzo dzevanhu chete voona chikonzero chesarudzo iyoyo, asi zvakare zvinobatsira mamaneja mukuziva izvo zvinhu zvavanofanira kuwedzera kuzvigadzirwa zvavo, zvinokanganisa sei shanduko idzi pakutengesa uye mari uye shanduko yemutengo ichave kutengesa. Ruzivo urwu runobatsira mukugadzira modhi yemusika uye kugonesa kufungidzira munzvimbo dzakasiyana dzebhizinesi.
Semuenzaniso, paunotenga imba sarudzo dzakaomarara dzekutenga dzinotariswa nevatengi vekumba mitengo yemubereko, zvanhasi zvirinani, kufarira nzvimbo, mhando yezvikoro, zvivakwa zvemazuvano, varaidzo nezvimwewo. panguva yekutenga maitiro kuita chiyero cheuwandu. Iyi nzira inoongorora zvigadzirwa nemasevhisi nenzira yakanakisa isingakurirwe neimwe nzira.
Iyo yechinyakare chiyero ongororo uye ongororo inoisa kukosha pane dzakasiyana ongororo inoita kukosha. Pane zvinopesana kusangana pamwe chete kunoongorora kunopfuudza kwevanopindura 'kusvika pakuwanda. Iyo inobatsira bhizinesi kuongorora masvomhu kuongorora kwevatengi kana maitiro evatengi uye kuita sarudzo dzinoenderana nekunzwisisa chaiko kubva kudhata.
Iyo sarudzo-based conjoint ongororo ndiyo inonyanya kufarirwa fomu yekuongorora pamwe chete. Mune ongororo iyi, vatori vechikamu vanoratidzwa dzakateedzana sarudzo uye vanokumbirwa kusarudza chinhu chimwe chete chavanoda kutenga kubva kwazviri. Muchiitiko chekumwe kuongorora kwekubatana, vanhu vanokumbirwa kurongedza kana kuyera sarudzo.
Tichiri kuongorora pamwe chete isu tinofungidzira kuti zvigadzirwa nemasevhisi akaputswa kuita akasiyana hunhu. Iyo yakakamurwa muzvikamu zvitatu zvakasiyana
1. Data - Muunganidzwa wedhata une chekuita nekutengesa-offs pane akasiyana hunhu uye hunhu mazinga. Kuunganidza ruzivo rwekutanga ongororo inoitwa iyo inopa ruzivo rwekuti chigadzirwa chakaputsika sei mupfungwa dzemutengi. Zvino mushure mekunyatso ongorora uye nekufungisisa, iyo yakaunganidzwa ruzivo inomiririrwa muchimiro chemibvunzo.
2. ongororo - Mushure mekuunganidzwa kwedata, kuongororwa kwe data kunoitwa, maitiro aya anowana zvinoreva kunze kwemhedzisiro. Machati, magirafu, uye zvimwe zvishandiso zvinoshandiswa kunyatsomiririra ruzivo rwakaunganidzwa pamwe nekukosha uye dudziro. Mhedzisiro yakaunganidzwa inofanirwa kumiririrwa nemazvo sezvo mamaneja anodikanwa kuti vanzwisise zvizere nekuinzwisisa.
3. Action - Uku ndiko kumeso kwechitatu uye muchikamu chino, mamaneja anoshandisa mhedzisiro yekuongorora pamwe chete uye kubatsira bhizinesi kumutsa kudiwa kwechigadzirwa chavo nemasevhisi.
Vatengesi vane shungu yekuziva izvo hunhu hwezvigadzirwa zvavo hunokosheswa nevatengi. Maitiro akagadzirwa mukutanga kwema60s naLuce neTurkey anoshandiswa kupindura iyi mibvunzo.
Kuongorora kwekubatana kunobatsira kwazvo kana makambani achigadzirisa kana kugadzirisa zvigadzirwa zvavo mumusika. Kana iyo vhezheni itsva yechigadzirwa ikatangwa iro remibvunzo rinosanganisira zvese zvinogoneka zvehunhu kambani inogona kuwedzera. Izvo zvinobatsira kuona kuti ndeapi mavara anofanirwa kuverengerwa kupihwa iwo akakosha anopindura akanamatira kune chaiwo hunhu. Izvi zvinobatsirawo pakuziva mabatiro aizoita pamitengo nemari uye purofiti yakazara.
Maitiro ekutaura kuConjoint Analysis
Kuti ndikupe zano rakareruka isu tinokurukura nezvekushanda kwekubatana kuongorora tichishandisa matanho matatu. Uchishandisa aya matanho iwe unogona kukurudzira iyo yekubatana kuongorora.
1.Kugadzira iyo Conjoint kana Discrete Sarudzo Nzira: Maitiro atinokurongera zvinoenderana nekusangana kwako nezvinangwa. Tinotanga nekunzwisisa yako bhizinesi mamiriro padanho rakadzika uye nesarudzo dzaunotarisana nadzo. Ipapo isu tinodonongodza imwe nzira yekubatana, kusanganisira sarudzo dzakasarudzika, semuenzaniso, iyo nzira yekubatanidza iyo inofanira kushandiswa. Iko kusanganiswa kweiyo conjoint maitiro uye hunhu kunounza iyo yakasarudzika dhata uye iwe unofanirwa kutora sarudzo dzakakosha nezve chako chigadzirwa uye masevhisi.
2. Kudzidza Zvakakosha kuMusika: Kuti unzwisise tradeoffs, zvimwe zvinhu zvinochengetwa mundangariro apo uchigadzira musika. Aya maficha ndizvo zvikamu zveConjoint Analysis ayo ari maficha uye mutengo wezvigadzirwa zvavo nemasevhisi. Iwe unogona kuitisa ongororo yekubatana iyo mibvunzo yekutanga inobvunzwa iyo inoshandiswa kuona mapatani ekupindura uye kuratidza zvido chaizvo zvevatengi.
3. Kugadzira Matanho: Zvichienderana nemaitiro uye mhinduro kubva kujojojo ongororo iwe unogona nyore kugadzira simulation zano kubvunza "ko kana" mibvunzo ine chekuita nezvako zvigadzirwa uye masevhisi. Ko kana tikashandisa tekinoroji nyowani? Ko kana isu tichiwedzera mutengo wedu ne5%? Ko kana isu tikaburitsa chigadzirwa ichi muchidimbu vhezheni? Ko kana tikasuma chigadzirwa chakafanana nemitengo yakasiyana? Izvi zvinokutendera iwe kuti uongorore zvinokanganisa shanduko yechigadzirwa kuburikidza neiyi simulation zano.
Iyi inotevera data ichapa iyo ruzivo inoenderana nemhando dzekubatana kuongorora uye nguva yekuishandisa.
1. Menyu yakavakirwa kusangana pamwe chete: Uku kuongorora kwakabatana kunopa rusununguko kune anopindura kurongedza kwavo chigadzirwa nemasevhisi. Paunofanirwa kusarudza mutengo, kugadzirwa kwechigadzirwa, zvigadzirwa zvigadzirwa, mapakeji ekuvaka, kana zvese zviri pamusoro. Iyo inokurudzira chaiwo-epasirose mamiriro ekutenga umo vapinduri vanokumbirwa kuchinjisa imwe sarudzo kune imwe.
2. Yakazara-profile kusangana pamwe chete: Izvo zvinonyanya kubatsira kana tichifanira kuyera hunhu zvinoshandiswa. Mune ino shanduko yekutengesa tsananguro inogadzirwa uye inounzwa kune vakapindura kuitira kukwana uye kufanofungidzira kuongororwa. Inopa huwandu hweruzivo rwemutengi wega wega.
3.Adaptive conjoint ongororo: Kuongorora uku kunosiyanisa sarudzo yakasarudzwa inopihwa kune vakapindura zvichibva pane zvavanofarira. Ongororo iyi inoshandiswa kuburitsa data rakapusa, sezvo ichinongedzera vatengi zvakanyanya hunhu uye nhanho izvo zvinoita kuti kusangana kwacho kuve kwakanyatsoita pasina kuuraya mibvunzo pamatanho ane chikumbiro chidiki kana chisina.
4. Sarudzo-yakavakirwa conjoint ongororo: Iyo inozivikanwa zvakare se discrete-sarudzo yekubatana kuongorora. Kana vakapindura vachisarudza kubva pane yakasarudzika yakazara-yakazara pfungwa saka ongororo iyi inobatsira. Iyo inokurudzira uye chaiyo mamiriro ekutengesa, ayo anoteedzera chaiwo kutenga, maitiro. Izvo zvinoburitswa nesarudzo-based conjoint ongororo zvinokupa fungidziro yezvakakosha maficha maererano nemitengo.
5. Kuzvitsanangura -kwakabatana kusangana: Uchishandisa iyi ongororo iwe haufanire kukudziridza yakazara nhoroondo pfungwa sezvo ichikupa iwe neiyo robust nzira iri nyore kuita. Inotungamira kubvunza maficha uye chimwe nechimwe chimiro chinomiririrwa zvakasiyana kuti chiongororwe kana kubviswa.
Bitcoin ine mukurumbira zvekuti yave kuda kufanana ne cryptocurrency ...